စားဖိုမှူး Automate နှင့် AWS နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုဘယ်လို
စားဖိုမှူးများနှင့် AWS: တစ်ဦးကအရေးပါသောအအဖွဲ့အစည်းက
တစ်ဦးကြီးကြပ်အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် Automate Chef
AWS နှင့်သင်၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ် Expand
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစားဖိုမှူးနှင့် Open-source ကိုအုပ်စုတစ်စု၏အင်အား
AWS စားဖိုမှူး Automate များအတွက် OpsWorks အမေဇုံက Web Services ကအကြားပူးတွဲသွားလာရင်း-to-စျေးကွက်ခေတ္တခဏဖြစ်ပါတယ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆော့ဖျဝဲ, Inc ဒါကဆိုလို, နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်းများကဒီအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သင်၏ချမ်းသာကြွယ်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကျေနပ်ကြံရာပါများဖြစ်ကြပြီးအကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏အဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီစားပွဲမှဆောင်တတ်၏အဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ဖို့စေ့စေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်။ အတူတကွကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေအပေါ်စောင့်ရှောက်မည်နှငျ့သငျ client ကိုဝေဖန်၏အမြင်ကြီးထွားလာအပေါ်စောင့်ရှောက်သည်ဤပူဇော်သက္ကာကိုစောင့်ကြည့်ပေါ်တွင်မူတည်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကစျေးကွက်ရှေ့ဆောင်တွေသငျသညျ (ကနျြောတို့က start ကနေကပြောသည်င့်ကဲ့သို့) မှအဆင်သင့်ပါပဲသေချာစေရန်ပူးပေါင်းကြပါပြီ "ဟုမိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ "
At ဦးခေါင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံး clients များနှင့်အတူတစ်ဦးပုံစံကိုကြည့်ပါ။ ကတည်းကကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပိုပြီးလုံခြုံ, မြန်ကုဒ်ကိုထမ်းရွက်ကူညီခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏အသင်းအဖွဲ့များပြောင်းလဲသွားတယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ပိုမူတည်ပါတယ်, စားဖိုမှူး Automate တစ်မစ်ရှင်အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးသို့လှည့်။ မည်သည့်မစ်ရှင်အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးကဲ့သို့ပင်၎င်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်မွံအာမခံအချို့သောအလေးအနက်စွမ်းအင်, ခေတ္တခဏနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 clients များကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်မစ်ရှင်-အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်လျှောက်လွှာအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်တို့ကိုလောင်စေရန်လိုအပ်သည်။
စားဖိုမှူး Automate များအတွက် AWS OpsWorks အလားတူထိရောက်မှု၏အဆငျ့, လုံခြုံရေး, နှင့်သင်ယေဘုယျဆို AWS အကျိုးကျေးဇူးအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ကြောင်းစားဖိုမှူး Automate များအတွက်ယိမ်းယိုင်အရည်အသွေးကိုပေးသည်။ ဒုတိယ-ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များသင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းယိမ်းယိုင်အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်သင့်စနစ်၏တုိ့မှဆန့်ကျင်သည့်အတိုင်း, သင်ပေးနိုင်ပါသည် AWS စားဖိုမှူး Automate ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်အခွင့်အလမ်း သငျသညျ 24x7x365 အတိုင်းအတာနှင့်ပေးဆောင်-အဖြစ်-you-go ခန့်မှန်းသည်။ reestablishes, AWS သင့်ရဲ့စစ်ကူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြစို့နှင့်အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ programming ။ ဒါကသင်နှင့်သင့်အုပ်စုတစ်စုသည်သင်၏ပြိုင်ဖက်ရိုက်နှက်အပေါ်ကိုအာရုံစားဖိုမှူး Automate ကြီးကြပ်လျော့နည်းစွမ်းအင်နှင့်အပိုဆောင်းအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်။
AWS Opsစားဖိုမှူး Automate အဘို့အကျင့်ကိုကျင့်ဒေသခံတစ်ဦး AWS အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ AWS ကနေဝယ်ဖို့ဆိုအုပ်ချုပ်ရေးလိုပဲ, သူတို့ကမှတ်တမ်းကုန်သည်ဖြစ်ကြသည်။ AWS, အားကောင်းပေးသည်သင့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဆကျဆံ, သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးအဘို့အဆက်အသွယ်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စားဖိုမှူးဆော့ဝဲ Inc ကိုတစ်ဦး AWS ကြံရာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အသုံးချအားကောင်း။ စားဖိုမှူး Automate များအတွက် AWS OpsWorks နှင့်အတူသငျသညျအမေဇုံက Web Services ကနှင့်အတူယခုကဲ့သို့အသငျသညျရှိသညျလက်ရှိဆကျဆံရေးအပျေါတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမဆိုသုံးစွဲခြင်းသင့်ရဲ့ AWS တာဝန်ခံတစ်ဦးကိုအသေးစိတ်အဖြစ်ဖွင့်ပြသည်။ သင့်အနေဖြင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုသငျသညျကျိန်းသေသိကြကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ယုံကြည်မှုတို့ကကမကထပြုစားဖိုမှူးအပေါငျးတို့သအင်အား, get ။ သင့်ရဲ့စားဖိုမှူးအသုံးပြုမှု သာ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဧရိယာကြည့်ဖို့, ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးချမှရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရှင်းသောတဦးတည်းထဲသို့ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏လျှောက်လွှာ stack အချို့ကိုအခြားအခြေခံအစိတ်အပိုင်းလိုပဲ, က AWS အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှပါးတစျခုကုမ္ပဏီတစ်ခုကအစီအစဉ်ဗူးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စားဖိုမှူး Automate: ဤအသစ်သောပူဇော်သက္ကာကို AWS clients များစားဖိုမှူးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို item ကြိုးစားရန်အဘို့အရိုးရှင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်အခမဲ့အချက်အချာ 10 မှတက်နှင့်အတူကလျှင်မြန်စွာစတင်နှင့်မည်သို့ရိပ်မိဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသောချဉ်းကပ်မှုဖွင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Controller သင်၏လျှောက်လွှာအစီအစဉ်များအပေါ်အားလုံးပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူဆက်ဆံစဉ်သငျသညျ perceivability, တသမတ်တည်းနှင့်ပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုပေးသည်။ စားဖိုမှူး Automate များအတွက် AWS OpsWorks နှင့်အတူ, သငျသညျ Supermarket ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်, စမ်းသပ်မှု-မီးဖိုချောင်, InSpec, Habitat, သင်၏နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် (သိသာတဲ့) စားဖိုမှူးများအပါအဝင်မှန်မှန်စားဖိုမှူးဇီဝစနစ်တွေ့ရှိခဲ့ open-source ကိုတူရိယာများအများစုအသုံးချမှထိုနည်းတူအဆင်သင့်ပါပဲ AWS မူဘောင် နှင့် applications များ။ သငျသညျနှစ်ဦးစလုံး University ရဲ့အကောင်းဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးပြီးဖမ်း၏လျှပ်တပြက်နှင့်အတူစတင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စားဖိုမှူး Automate နှင့်အတူစတင် speedier ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတောင်းဆိုမှုများဒါဟာခဲ့ဘယ်တော့မှမရဲ့; သင့်အခြားအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကဲ့သို့တူညီသော AWS နှစ်သိမ့်၌တရားယခုလက်လှမ်း။
အကွိမျမြားစှာတိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲရန် 12 Tricks
ဂူဂယ်လ်တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ9အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ